Spike: More than email. Better than chat. 2.8.1.4 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.8.1.4 လြန္ခဲ့ေသာ3ရက္က
Application မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း Spike: More than email. Better than chat.
Spike: More than email. Better than chat. ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Tired of cluttered email? Cravingafast and secure email app to spike your productivity? Try Spike Conversational Email!
The world's first conversational email app, Spike will revolutionize the way you work—pushing productivity & collaboration to new heights. Spike is an entirely new way to communicate, combining the best of email and instant messenger, to cut down on distractions and streamline everyday communication.
Spike’s fast and secure email is for anyone looking foramodern communicational and collaborative workspace. We’ve ditched the endless threads and useless headers, integrated read receipts and simplified your inbox for easier navigation. There’s alsoaunified calendar and powerful file management, built-in, so you can get more done.
⭐ Real-Time Messaging – Conversational Email keeps the chat moving with read receipts
⭐ Better Collaboration – Groups provides the ultimate team chat workspace
⭐ Cleaner Inbox – Priority Inbox pushes your most important messages to the top
⭐ Get Spike on any device
Spike (formerly Hop) is the first Conversational Email app. Discover the powerful features that drive Spike and experience howaunified mail app optimizes your productivity in one seamless workspace.
► Conversational Email - Real-time email messaging helps you make meaningful connections with customers and colleagues
➕ Bring the human experience back to communication with real-time chat-like conversations, all with your existing email
► Priority Inbox - Make inbox zeroathing of the past and enjoy automatic organization that prioritizes people over threads. Conversations are sorted by contact for quicker navigation
➕ Social media, newsletter distractions and less important emails are automatically sorted into the “Other” inbox
► Groups - Manage multiple email chat groups in one app with real-time replies & file sharing
➕ Invite anyone to join the Group, whether they use Spike or not. Everyone can be part of the chat conversation
► Advanced Search- Find everything you need in an instant—just type in what you’re looking for and voila!
➕ Search by contact or keyword to find anything you need—like that elusive flight confirmation or that report from last October
► File Manager - Visually preview files directly in emails and quickly find the files you need
➕ Works with all file types including photos, spreadsheets, videos, audio files, PDFs, & GIFs
► Calendar - Consolidate all your calendars in one place and manage every appointment, meeting, and date fromasingle screen
➕ Integrates seamlessly with Google Calendar, Apple Calendar, Facebook & more
► Super Stealth Encryption - Secure those messages with our powerful AES256 encryption that ensures high-level protection for your data & documents. Encrypted emails are displayed directly within Spike and are justatap away for non-Spike users
➕ Quickly toggle between encrypted & standard email
► An Arsenal of Expression - When words just aren’t enough, get your message across using GIFs, voice notes, emojis, drawings, photos & videos. Havealittle fun!
➕ Place voice & video calls directly within Spike & stop switching between apps
► DARK MODE - Spike’s dark theme grants sharper contrasts, decreases eye fatigue & saves battery life
Check out www.spikenow.com/ to learn more about Conversational Email or chat with the Spike team at chat@spikenow.com
ရှုပ်ပွနေအောင်ကအီးမေးလ်ပင်ပန်းနေပြီလား သင့်ရဲ့ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှုန်းကိုမြင့်တက်ဖို့အစာရှောင်ခြင်းနှင့်လုံခြုံတဲ့အီးမေးလ် app ကိုစွဲလမ်း? စကားပြောဆိုမှုအီးမေးလ် Spike စမ်းကြည့်ပါ!
ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးစကားပြောဆိုမှုကအီးမေးလ် app ကို Spike သငျသညျအလုပ်မလုပ်-တွန်းအားပေးကုန်ထုတ်စွမ်းအား & ပူးပေါင်းအသစ်အထွဋ်ဖို့လမ်းပြောင်းလဲပါလိမ့်မယ်။ Spike အာရုံပြံ့လှငျ့အပေါ်ခုတ်လှဲခြင်းနှင့်နေ့စဉ်ဆက်သွယ်ရေးချောမွေ့ရန်, အီးမေးလ်နဲ့ instant messenger ရဲ့အကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်ပြီး, ဆကျသှယျဖို့လုံးဝသစ်ကိုနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
Spike ရဲ့အစာရှောင်ခြင်းနှင့်လုံခြုံတဲ့အီးမေးလ်ခေတ်မီဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပူးပေါင်း Workspace ကိုရှာနေမည်သူမဆိုအဘို့ဖြစ်၏။ ကျနော်တို့အဆုံးမဲ့ချည်နှင့်အချည်းနှီးခေါင်းစီးများ, ဘက်ပေါင်းစုံဖတ်လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများကပြေးနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူအညွှန်းအဘို့သင့်စာပုံးရိုးရှင်းသောပါတယ်။ အဲဒီမှာတစ်ဦးစုစည်းပြက္ခဒိန်နှင့်အစွမ်းထက်ဖိုင်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု, built-in ကိုလည်းဖွင့်, ဒါကြောင့်သင်ပိုမိုပြုရနိုငျသညျ။
Spike အီးမေးလ် Messenger ကို များ၏
⭐အကွိမျမြားစှာမေးလ်အကောင့် - အားလုံးသင့်အီးမေးလ်လိပ်စာများတစ်ခုတည်း app ကိုသို့
⭐ရီးရဲလ်အချိန် Messaging ကို - စကားပြောဆိုမှုအီးမေးလ်ဖတ်လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများနှင့်အတူရွေ့လျားဟာချက်တင်စောင့်ရှောက်
⭐ သာ. ကောင်း၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် - အဖွဲ့များအဆုံးစွန်အဖွဲ့ချက်တင် Workspace ကိုထောက်ပံ့ပေး
⭐အမှောင် Mode ကို - မျက်စိ-strain လွယ်ကူခြင်းပိုကောင်းဖတ်နိုင်တဲ့ပျော်မွေ့ & save ဘက်ထရီသက်တမ်း
⭐ Cleaner Inbox ထဲမှာ - ဦးစားပေး Inbox ထဲမှာထိပ်ရန်သင့်အရေးအပါဆုံးမက်ဆေ့ခ်ျတွန်း
တစ်နေရာတည်းတွင်⭐အားလုံးဖိုင်များ - ဖိုင်မန်နေဂျာနှင့်အခြား attachment ကိုမဆုံးရှုံးဘယ်တော့မှမ
⭐တစ်ခုမှာဘဝက, တစျဦးကပြက္ခဒိန် - အီးမေးလ်အကောင့်မျိုးစုံကိုထံမှအားလုံးသင့်ရဲ့ပြက္ခဒိန် Organize
⭐လုံခြုံတဲ့အီးမေးလ်ဂ - အဆုံးစွန်လုံခြုံရေးဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းအီးမေးလ်စာဝှက်စနစ်
⭐မဆိုစက်ပေါ်ရှိ Spike Get
Spike - အီးမေးလ် များ၏အနာဂတ်
Spike (ယခင်-Hop) ပထမစကားပြောဆိုမှုအီးမေးလ် App ဖြစ်ပါတယ်။ Spike မောင်းသောအစွမ်းထက် features တွေရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးစုစည်းမေးလ် app ကိုတဦးတည်းချောမွေ့စွာ Workspace ၌သင်တို့၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုပိုမိုကောင်းမွန်ပုံကိုခံစားရသည်။
► စကားပြောဆိုမှုအီးမေးလ် - ရီးရဲလ်အချိန်ကိုအီးမေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျပို့သငျသညျဖောက်သည်များနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူအဓိပ္ပါယ်ရှိသောဆက်သွယ်မှုလုပ်ကူညီပေးသည်
➕အားလုံးသင့်ရဲ့လက်ရှိအီးမေးလ်ကိုအတူပြန် Real-time chat-တူသောပြောဆိုမှုများနှင့်အတူဆက်သွယ်ရေးဖို့လူ့အတှေ့အကွုံကိုယူခဲ့
► ဦးစားပေး Inbox ထဲမှာ - စာပုံးသုညအတိတ်၏အရာ Make နှင့်ချည်ကျော်ကလူဦးစားပေးအလိုအလျှောက်အဖွဲ့အစည်းကိုပျော်မွေ့။ conversations မြန်အညွှန်းများအတွက်အဆက်အသွယ်အားဖြင့်ခွဲခြားပေးသည်
➕လူမှုမီဒီယာ, သတင်းလွှာအာရုံပြံ့လှငျ့နှင့်လျော့နည်းအရေးကြီးသောအီးမေးလ်များကိုအလိုအလြောကျက "Other" စာဝင်ပုံးသို့ခွဲခြားပေးသည်
► အဖွဲ့များ - Real-time ပြန်စာများ & ဖိုင်ခွဲဝေမှုနှင့်တသားတ app ထဲမှာမျိုးစုံကအီးမေးလ်ချက်တင်အုပ်စုများကိုစီမံခန့်ခွဲ
➕သူတို့ Spike ကိုအသုံးပြုဖို့သို့မဟုတ်မဖြစ်စေ, အုပ်စု join ဖို့မည်သူမဆိုဖိတ်ခေါ်ပါ။ လူတိုင်းချတ်စကားဝိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်
► Advanced Search - ပဲချက်ချင်း-သင်တို့အဘို့အရှာနေနှင့်ကဲဒါဆိုရင်တော့အနေအဘယ်အရာကိုရိုက်ထည့်သင်တစ်ဦးအတွက်လိုအပ်သမျှကိုရှာပါ!
► Manager ကို File - အီးမေးလ်များကိုတိုက်ရိုက်ပုံခပ်ဆင် preview ကိုဖိုင်တွေနဲ့လျင်မြန်စွာသင်လိုအပ်သည့်ဖိုင်များကိုရှာဖွေ
ဓာတ်ပုံများ, spreadsheets, ဗီဒီယိုများ, အသံဖိုင်တွေ, PDF များ, & GIF များအပါအဝင်အားလုံးဖိုင်အမျိုးအစားများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်➕
►ပြက္ခဒိန် - တစ်နေရာတည်းတွင်အားလုံးကိုသင့်ပြက္ခဒိန်များခိုင်မာအောင်နှင့်တစ်ခုတည်းကိုမျက်နှာပြင်ကနေတိုင်းချိန်း, အစည်းအဝေးနှင့်ရက်စွဲကိုစီမံခန့်ခွဲ
➕ Google ကပြက္ခဒိန်, Apple ကပြက္ခဒိန်, Facebook မှာအတူချောမွေ့စွာပေါင်းစပ် & ပိုပြီး
► စူပါ Stealth လျှို့ဝှက်ကုဒ် - သင့်ရဲ့ဒေတာ & စာရွက်စာတမ်းများများအတွက်အဆင့်မြင့်ကာကွယ်မှုသေချာလုသောငါတို့အစွမ်းထက် AES256 encryption ကိုရှိသူများမက်ဆေ့ခ်ျ Secure ။ စာဝှက်ထားတဲ့အီးမေးလ်တွေကို Spike အတွင်းကိုတိုက်ရိုက်ပြသခြင်းနှင့် Non-Spike အသုံးပြုသူများအတွက်ရုံကိုထိပုတ်ပါကွာဖြစ်ကြ၏
➕လျင်မြန်စွာ encrypt လုပ်ထား & စံအီးမေးလ်ကအကြား toggle
► Expression တစ်ခုအာဆင်နယ် - စကားလုံးများကိုရုံမလုံလောကျတဲ့အခါ, GIF များ, အသံမှတ်စု, အီမိုဂျီရေးဆွဲ, ဓာတ်ပုံများ & ဗီဒီယိုများ အသုံးပြု. ဖြတ်ပြီးသင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုရ။ အနည်းငယ်ပျော်စရာရှိသည်!
➕ရာဌာနစကားသံကို & ဗီဒီယိုက apps များအကြား switching ကိုရပ်တန့် & Spike အတွင်းကိုတိုက်ရိုက်ခေါ်ဆို
► မှောင်မိုက်ကို MODE - Spike ရဲ့မှောင်မိုက်တဲ့ဆောင်ပုဒ်ပြတ်သားထူးခွားသညျ့ပေးထားတယ်, ဘက်ထရီသက်တမ်းမျက်စိပင်ပန်းနွမ်းနယ်လျော့ကျ & ကယ်တင်
အထဲက Check www.spikenow.com/ chat@spikenow.com မှာစကားပြောဆိုမှုအီးမေးလ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူပါသို့မဟုတ် Spike အသင်းနှင့်အတူ chat ဖို့
Spike: More than email. Better than chat. အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Spike: More than email. Better than chat. အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Spike: More than email. Better than chat. အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Spike: More than email. Better than chat. အား အခ်က္ျပပါ
Spike: More than email. Better than chat. ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Spike: More than email. Better than chat. အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.8.1.4
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://gethop.com/s/about/privacy/
App Name: Spike: More than email. Better than chat.
Release date: 2019-09-16 16:34:11
လက်မှတ် SHA1: FE:66:19:3B:B2:5A:35:14:C0:EF:54:65:94:4E:15:1A:BE:79:D5:5A
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Erez Pilosof
အဖွဲ့အစည်း (O): Hop
Spike: More than email. Better than chat. APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ